Genocide incitation or ဂျီနိုဆိုဒ်အတွက် တဘက်လှည့်သွေးထိုးမှုကြီး | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« Inside Story – Why is the world ignoring Myanmar’s Rohingya?
Myanmar Muslims’ stand on request by our Myanmar ‘friends’ to help defend the ugly international image of Myanmar »
ဒီလို အခြေခံအဆင့် research ၊ သုတေသနကိုတောင် ကျေအောင်မလုပ်ဘဲ ရေးထားတဲ့မှတ်စုကို မြန်မာနိုင်ငံကိုယ်စားပြုမီဒီယာကြီးက တာဝန်မဲ့ဖြန့်ဝေခဲ့တာပါ။ တနည်းပြောရရင်တော့ ခါးတောင်းကြိုက်တဲ့ နေရာမှားနေလို့ ကိုယ့်အရှက်ကိုယ်ခွဲပြီး ဒါမြန်မာတမျိုးသားလုံးအလိုရှိနေတဲ့ ဆန္ဒလို့ အသားလွတ်ဝါဒဖြန့်တာပါ။
မြန်မာပြည်က ဒုနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဖြစ်သူ ဘင်္ဂလားကိုသွားပြီး ရိုဟင်ဂျာတွေ ပြန်ယူပါ့မယ်လို့ ပြောခဲ့တာ အဟုတ်တကယ်ဖြစ်လို့ မြန်မာ့ (self claim) နံပါတ် ၁ မီဒီယာကြီးအပါအ၀င် အခြားပြည်တွင်းမီဒီယာတွေက ဘာမှဝေဖန်ချက်မပေးခဲ့တာပေါ့။ နောင်များကျတော့ နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးက ကုလရဲ့ ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီးကို တရားဝင်ပြောတဲ့ မြန်မာပြည်တွင်းက ရိုဟင်ဂျာရှင်းထုတ်ရေးနည်းလမ်းကိုတော့ မြန်မာ့နံပါတ် ၁ မီဒီယာကြီးက အကျယ်တ၀န့် ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာ့နံပါတ် (၁) မီဒီယာကြီးခင်ဗျား – အစိုးရအဖွဲ့တဖွဲ့ထဲက အဖြေနှစ်မျိုးကို ထုတ်ပြနေတာ သတိထားမိပါရဲ့လားခင်ဗျား။ ခင်ဗျားတို့ ရေးသားဝေဖန် ထောက်ပြသင့်တာက အဲဒီအချက်ဖြစ်ပါတယ်။
ဖဆပလ လက်ထက်က အမှား
“ရခိုင်မြောက်ပိုင်းဟာ အာရှရဲ့ ကိုဆိုဗို ဖြစ်လာနိုင်မလား” ဆိုတဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်ပေါ်က မှတ်စုမှာ ရိုဟင်ဂျာနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ဖဆပလလက်ထက်က အမှား ကျူးလွန်ခဲ့တာရယ်လို့ ဖော်ပြထားပါတယ်။ မြန်မာ့နံပါတ် ၁ မီဒီယာကြီးခင်ဗျား – မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှု သမိုင်းနဲ့အတူ မွေးဖွားလာတဲ့ ဖဆပလက လက်ရှိ အရေခွံလဲအစိုးရလောက် အကျင့်ပျက်ခြစားမှု မများခဲ့ပါ။ ဖဆပလလက်ထက်က အမှားကျူးလွန်ခဲ့တယ်ပဲထားထား၊ အမှန်ကျူးလွန်တယ်ပဲထားထား၊ ဒါအတိတ်က မြန်မာနိုင်ငံ အုပ်ချုပ်သူတွေ လုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်ပါပဲ။ ဒါကြောင့်မို့လဲ နိုင်ငံတကာက ရိုဟင်ဂျာအရေးကို ခင်ဗျားတို့ပြည်တွင်းရေး၊ ခင်ဗျားတို့ဖာသာဖြေရှင်းရမယ့် အရေးဆိုပြီး ထောက်ပြနေကြတာကလား။
လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်ပိုင်းမှ မြန်မာပြည်ထဲ ၀င်လာကြတဲ့သူတွေထဲမှာ နိုင်ငံတော်ကို အကျိုးမပြုသူတွေပဲ ရှိတယ်ဆိုရင်တော့ လွဲချက်က နာသဗျာ။ နိုင်ငံအများစုကျင့်သုံးနေတဲ့ ကိုယ့်နိုင်ငံကို အကျိုးပြုနိုင်သူ၊ ပညာတတ်၊ လူရည်မွန်ဆိုရင် နိုင်ငံတွင်း ၅ နှစ်လောက် အခြေချနေထိုင်မယ်ဆိုရင်တောင် နိုင်ငံသားအဖြစ် စဉ်းစားနေပါပြီ။ ဒါမှမဟုတ် resident visa မျိုး ခွင့်ပြုပေးနေပါပြီ။ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရက အဲလိုနည်းမှန်လမ်းမှန်ကို မချပြပဲ ဂုဏ်သိက္ခာရှိ သမ္မတ၀က်ဘ်ဆိုဒ်ကိုနေ “ခိုးဝင်လာကြသူများ” ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုံးနဲ့ ရိုဟင်ဂျာပြဿနာကို အဖြေရှာဖော်ပြလိုက်လေတော့ ဟိုကလည်း မဆိုင်းမတွ ပယ်ပြီပေါ့ဗျာ။ စကားလုံးအသုံးအနှုံးကိုက “တရားမ၀င် အခြေချနေထိုင်လာသူများ” ဆိုရင်တောင် သမ္မတ ၀က်ဘ်ဆိုဒ်နဲ့ လိုက်ဖက်သေးသဗျ။ content writers တွေ အင်မတိ အင်မတန် ဝေါဟရကြွယ်ဝကြပါပေရဲ့၊ ရပ်ကွက်ထဲ ပဲပြုပ်သည် အသုံးအနှုံးအတိုင်းပါပေ့။
ဒါ့ပြင် သမ္မတကြီးဦးသိန်းစိန်ရဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံခရီးစဉ်ကို ဘန်ကောက်ပို့စ်က ဝေဖန်တော့ အလဲဗင်းဂရုက ရိုဟင်ဂျာအရေးနဲ့ ပတ်သတ်တာတွေလောက် ထုတ်နုတ်ပြီး မီးလောင်ရာလေပင့်သလို၊ ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ ပတ်သတ်လာရင် သာမာန်ထက်ပိုပြီး စိတ်ဓာတ်ပြင်းထန်တဲ့ ပြည်သူတွေ ရှိနေတာတောင်၊ အဲဒိပြည်သူများအကြားမှာ ထားရမယ့့် စည်းကိုလွန်ကာ အချိန်ကိုက်ဗုံး ဖောက်ခဲ့ပြန်ပါတယ်။
ဘန်ကောက်ပို့စ်မှာ အယ်ဒီတာက “ဒီနည်းလမ်း တစ်ခုပဲရှိတယ်ဆိုတာ လက်ခံနိုင်ဖွယ်မရှိ” ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ ဆောင်းပါးရေးသားခဲ့ပြီး အဲဒီဆောင်းပါးမှာလည်း
The Rohingya _ the word itself was invented and introduced during the military regimes _ have rights, too.
“ရိုဟင်ဂျာစကားလုံးဆိုတာ စစ်အုပ်စုလက်ထက်မှာပဲ တီထွင်ဖန်တီး မိတ်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့ စကားလုံးပါ။” လို့ ထည့်သွင်းရေးသားထားပါတယ်။ ဒီအချက်ကို အလဲဗင်း (self claim) နံပါတ် ၁ မီဒီယာကြီး ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ ချန်လှပ် ထားခဲ့တာလား၊ မေ့မှားကျန်ခဲ့တာလားတော့ မသိ။
အလဲဗင်းခင်ဗျား – ခင်ဗျားတို့ “ထိုင်းနိုင်ငံခရီးစဉ် မစတင်မီ နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်အား The Bangkok Post သတင်းစာ ဝေဖန်” ခေါင်းစဉ်နဲ့တင်ထားတဲ့ သတင်းမှာ အဲဒီအချက်ကို ဘာလို့များ ချန်ထားရစ်ခဲ့ပါလိမ့်။
ဒါတွင်မကသေးဘဲ ဘန်ကောက်ပို့စ်က ထောက်ပြလိုက်တဲ့ “ရိုဟင်ဂျာဆိုတာ စစ်အုပ်စုလက်ထက်အတောအတွင်း တီထွင်ဖန်တီးထွက်ပေါ်လာတဲ့စကားလုံး ” ဆိုတဲ့အချက်ကို ပိုပြီး သံသယ၀င်စေတာက အောက်ဖော်ပြပါ အဖြစ်အပျက်မျိုးတွေပါ။
နဖူးပေါ်လက်တင် စဉ်းစားကြည့်စေချင်စမ်းပါတယ် အလဲဗင်းမီဒီယာဂရု။ ရိုဟင်ဂျာပြဿနာက မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြဿနာပဲ။ လူဝတ်မလဲခင် ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေ ရှုပ်ခဲ့တဲ့ ဇတ်ထုပ်ပဲ။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ရိုဟင်ဂျာနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ အဖြေကို နိုင်ငံတကာက ငံ့လင့်နေတာ သင့်တော်မှုတစ်ခုပဲမဟုတ်လားဗျာ။
အလဲဗင်းမီဒီယာအုပ်စုခင်ဗျား – ခင်ဗျားတို့အချိန်ကိုက်တင်ပေးခဲ့တဲ့ “ရခိုင်မြောက်ပိုင်းဟာ အာရှရဲ့ ကိုဆိုဗို ဖြစ်လာနိုင်မလား” ဆိုတဲ့ မှတ်စုမှာ ရေးသားသူက “ဦးသိန်းစိန်ခေါင်းဆောင်တဲ့ အစိုးရဟာ ရာစုဝက်လောက် နာမည်ပျက် ပုံရိပ်ဆိုးခဲ့တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကို ပုံရိပ်ကောင်းပြန်းထွက်အောင် အသဲအသန်ကြိုးစားနေရတာ သတိထားမိတယ်။”အဲသလိုရေးသားခဲ့ပါတယ်။
ခင်ဗျားတို့ မီဒီယာကြီး မေ့နေတာက မြန်မာပြည်ကို နှစ် ၅၀ လောက်နောက်ကျကျန်ရစ်အောင် လုပ်ခဲ့တာ ဘယ်သူတွေများပါလဲ၊ သူတို့လုပ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေကို သူတို့ဖာသာဖြေရှင်းမယ်ဆိုရင်တောင် နောက်ထပ် နှစ် ၅၀ လောက်အချိန်ယူရပါဦးမယ်။ သူတို့ကိစ္စသူတို့ဟာသူတို့ ဖြေရှင်းပါစေပေါ့လို့ ခင်ဗျားတို့ တာဝန်သိမီဒီယာ၊ ပြည်သူ့မီဒီယာက ထောက်ပြရမှာပါ။
တဖန် ဆက်ပြီးတွေ့ရတာက – “ဒီထက်မက ဗမာအမျိုးသား ပြန်လည်ရင်ကြားစေ့ရေးထက်ကိုကျော်ပြီး ဟိုး ဗိုလ်ချုပ်တို့ မကွယ်လွန်ခင် လွတ်လပ်ရေးခေတ်ကလို့ တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ပါ ပြန်လည်ရင်ကြားစေ့ပြီး အမျိုးသားညီညွှတ်ရေးကြီး ဖြစ်မယ်ဆို ရာစုဝက်လောက် ဆိုးခဲ့တဲ့ ပုံရိပ်ကို ပျောက်သွားစေမှာပဲ။”
ဟုတ်တာပေါ့၊ ဒီတချက်ကတော့ အမှန်အကန်ပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ပင်လုံတုန်းကလိုပဲ ဗိုလ်ချုပ်ကိုအနီးကပ် စိတ်ရင်းမှန်၊ သစ္စာတော်ခံပီသစွာ အကူအညီပေးခဲ့ကြတာ ဘယ်သူတွေများပါလဲ။ ခုအချိန်မှာ ခင်ဗျားတို့က မြန်မာပြည်တွင်း မွတ်စလင်မ်များရဲ့ ထောက်ခံမှုကို လိုချင်ရင် အဲဒါတွေကို ဖော်ထုတ်တင်ဆက်ရမှာပါ။ အဲဒီအချက်တွေနဲ့ မြှုဆွယ်ရမပေါ့။ မြန်မာမွတ်စလင်မ်တွေ ငံ့လင့်နေတာ အသိအမှတ်ပြုမှုပါ။ နံပါတ် ၁ မီဒီယာကြီးမှာ သူတို့အတွက် ဘယ်လိုအခန်းကဏ္ဍပေးလိမ့်မလဲဆိုတာ သူတို့စောင့်ကြည့်နေကြဆဲပါ။
တဖန် ဆက်လက်ဖတ်ရှုရပြန်တာက – “တစ်ဖက်မှာလည်း နိုင်ငံတကာက အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်နိုင်ငံတွေက ရိုဟင်ဂျာပြဿနာကို ဘာသားရေးနှိပ်ကွပ်တဲ့ လုပ်ရပ်ဆိုပြီး ဒါးဆွဲ ဒုတ်ဆွဲ မြန်မာကို ဆဲဆိုရှုတ်ချကြိမ်းဝါးနေတာကို ပြည်တွင်း မြန်မာနိုင်ငံသား အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေက ဒါဟာ ဘာသာရေးပြဿနာမဟုတ်ဘူး လူမျိုးရေးပြဿနာပါလို့ ဘာလို့ထွက်မပြောကြသလဲ။ သူတို့ပါ ဒီစစ်တကောင်းဘင်္ဂါလီတွေကို မွတ်ဆလင်ညီအကိုများဆိုပြီး ဂရုဏာသက် ဘက်လိုက်ကာကွယ်တဲ့ စာတွေ အပြောတွေလုပ်နေကြတယ်၊ ဒါလည်း မဟုတ်သေးဘူး။ ”
မြင်သာအောင်ပြောရရင်တော့ ခင်ဗျားတို့က ကိုယ့်တာဝန် ကိုယ်မှမယူဘဲ၊ ဒါ့ကြောင့် ဒါမျိုးတွေ ဖြစ်လာရတာပ။ အာဖဂန်မြေက တာလီဘန်တွေကို ရုရှထဲသွင်းဖို့ သူလျှိုမွေးရင်း ကိုယ့်ကိုပြန်ခြောက်လို့ ကန်ထုတ်လိုက်ရတဲ့ အမေရိကန်အဖြစ်နဲ့ တယ်ဆင်နေသကိုး။
နောက်တစ်ချက်က ဟဒယပါ။ ဘာတဲ့၊ မြန်မာမွတ်စလင်မ်တွေထွက်မပြောဘူးဟုတ်စ။ စင်ကာပူလို ကျွန်းနိုင်ငံသေးသေးလေးမှာတောင် racial harmony အတွက် ပါလီမန်အမတ်နေရာ ခွဲတမ်းညီသဗျ။ မြန်မာမွတ်စလင်မ်တွေထဲက ဘယ်သူထွက်ပြောလို့ ဘယ်သူကများ အရေးစိုက်မှာတဲ့လဲ။ မြန်မာမွတ်စလင်မ်ပါလီမန်အမတ် ဒါမှမဟုတ် နိုင်ငံရေးအရ အရေးပါတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ် ဘယ်နှစ်ဦးလောက် ခင်ဗျားတို့ထဲ နေရာပေးဖူးလို့တုန်းဆိုတဲ့ အမေးပဲ မြန်မာမွတ်စလင်မ်တွေဘက်က ထွက်လာပါလိမ့်မယ်။
မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အစ္စလာမ်ဘာသာရေး အဖွဲ့ကြီးမှ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် များသို့ မေတ္တာရပ်ခံပန်ကြားလွှာ (၅-၆-၂၀၁၂
မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အစ္စလာမ်ဘာသာရေး အဖွဲ့ကြီး၏ သဘောထားထုတ်ပြန်ချက် (၈၊၆၊၂၀၁၂)
ခင်ဗျားတို့ပြောသလိုဆို၊ ဒါဘာသာရေးမဟုတ်၊ လူမျိုးရေးပြဿနာ။ ဒီလိုဆို ဟုတ်ကပြီ။ ဘာသာရေးမဟုတ်လို့ ပြည်တွင်းက အစ္စလာမ်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေ ထုတ်ပြန်သင့်တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးစာတမ်း တွေ ထုတ်ပြန်ပြီး သာသနာရေးနည်း လမ်းအရသူ့လူသူထိန်းပြီးမှ ခင်ဗျားတို့က ဘာလို့ ထွက်မပြောသလဲ မေးခွန်းထုတ်နေရတုန်းဗျ။ ခင်ဗျားတို့ပဲ ဘာသာရေးမဟုတ်ဆိုမှာတော့ ၊ မြန်မာမွတ်စလင်မ်တွေထဲမှာ နိုင်ငံရေးအရ အရာရောက်တဲ့ခေါင်းဆောင် ရှိလို့လားဗျာ။
အဲ – ရှိတဲ့ ပေါ်ပြူလာ ကိုမြအေးကလည်း သူ့ဆန္ဒထုတ်ပြောပြီးပြီလေဗျာ။ ဘာထပ်လုပ်ပေးရအုန်းမလဲခင်ဗျာ။
ဘာသာရေးပဋိပက္ခယိမ်း ဟုတ်စ။ လက်ရာမြောက်ပါပဲ။ ရခိုင်အရေးစဖြစ်တော့ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာမွတ်စလင်မ်တွေ ဘာတွေလုပ်ခဲ့သလဲ၊ ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေပေါ်မှာ ဘယ်သူတွေ ဘာလုပ်ခဲ့သတုန်းဆိုတာ နိုင်ငံတကာက သက်သေခံနေဆဲပါ။ မွတ်စလင်မ်မုန်းတီးရေးအရင်းခံ ၀ါဒီတွေရဲ့ အစ္စလာမ်သာသနာကို တိုက်ရိုက်ထိခိုက်ပြီး မိုက်ရိုင်းပြုမူ တံခွန်ထူမှုနဲ့ မြန်မာမွတ်စလင်မ်တွေရဲ့ သည်းခံစိတ်မွေးမြူပြီး လိုက်လံ ဖျောင်းဖျမှုက တိုက်ရိုက်အချိုးချလို့ရပါရဲ့။
အာဖဂန်မှာ ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ဖျက်လို့ အသားလွတ်အကြိမ်းခံ၊ အဆဲခံရတာလည်း မြန်မာမွတ်စလင်မ်၊ ခု ပြည်တွင်းက ဗလီတွေအဖျက်ခံ၊ လူတွေအသတ်ခံရလို့ နိုင်ငံတကာက မီးမောင်းထိုးတော့လည်း ဒါမောင်မင်းတို့ ပြည်တွင်းမွတ်စလင်မ်တွေ မကောင်းလို့ဆိုတာက စေ့စေ့တွေးတော့ ရေးရေးပေါ်လာတဲ့ တယ်ပြီးမဟုတ်တဲ့ မဟုတ်ရေးချပါ။
ကမ္ဘောဒီယားနဲ့ ထိုင်း ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်းလုပွဲတုန်းက နှုတ်ဆိတ်လွန်းတဲ့ အာဆီယံအတွင်းရေးမှူး ထိုင်းနိုင်ငံသား အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် ဒေါက်တာဆူရင်းဖစ်ဆူဝမ်က အခု ရိုဟင်ဂျာကိစ္စကျမှ အသံထွက်လာတာ အတော်ရုပ်ပျက်လွန်းတယ်။
အတော်ရုပ်ပျက်၊ မပျက်ဆိုတာ နိုင်ငံတကာအသိုင်းအ၀ိုင်း စောင့်ကြည့်လူတန်းစားကမှ သတ်မှတ်လို့ရတာပါ။ ကာယကံရှင် နှစ်ပါတီဘက်က အသားလွတ်စွပ်စွဲပြီးလိုသလို ကောက်ချက်ဆွဲလို့မရပါ။
ထိုင်းနဲ့ ကမ္ဘောဒီးယား တို့ ဘယ်လိုပြေလည်သွားသလဲဆိုတာကို မဖော်ပြပဲ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်ကို ဘာကြောင့် မဆီမဆိုင်မျက်မုန်းကျိုးနေရပါသလဲ။ နိုင်ငံတကာ တရားရုံးရဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် ဇူလိုင်က ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့ ဆင့်ဆိုချက်အရ ထိုင်းရော ၊ ကမ္ဘောဒီးယားဘက်ကပါ အဲဒီဘုရားကျောင်ပတ်လည်က တပ်တွေကိုနောက်ဆုတ်ပေးခဲ့ကြတာပ။
ဒီတော့ အလဲဗင်းနဲ့ ကိုအောင်ဇင်လတ်တို့ခင်ဗျား – ရိုဟင်ဂျာအရေးကို ကုလအေဂျင်စီတွေက လတ်တလော ဘယ်လိုများကိုင်တွယ်၊ သတင်းထုတ်ပြန်နေပါသလဲ။ လူ့အခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်ရေး Human Rights Watch ကဆိုရင် ဦးသိန်းစိန်ရဲ့ ထိုင်းအလည်အပတ်ခရီးစဉ်ချိန်သားကိုက် ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ယင်လတ်ဆီ စာတောင်ပေးပို့ခဲ့သဗျ။ (http://www.hrw.org/news/2012/07/20/thailand-press-burmese-president-rights)
ဒီတော့ကား မြန်မာအစိုးရအနေနဲ့ ရိုဟင်ဂျာအရေးမှာ ကုလအဆုံးအဖြတ်ကို ဘာလို့အဆိုမပြုသေးတာတုန်းလို့ ဆန်းစစ်ရတော့မပေါ့။
အဆိုပြုခဲ့လို့ ကုလကဆုံးဖြတ်ပေးလိုက်မယ့်အဆုံးအဖြတ်ကို မြန်မာပြည်က လူများစုကြီးက ထိုင်းတို့ ကမ္ဘောဒီးယားတို့လို နိုင်ငံကြီးသားများပီသစွာ လက်ခံနိုင်ကြရင် ကောင်းလေစွ။
တကယ်ဆို ရိုဟင်ဂျာပြဿနာကို အဲဒီမွတ်ဆလင်နိုင်ငံတွေက ဘာများဖြေရှင်းပေးနိုင်သလဲ၊ အိန္ဒိယက သူ့ထဲဝင်လာတဲ့ ဘင်္ဂလားတွေကို ပစ်သတ်နေတာကို မွတ်ဆလင်ဘရားသားဆိုပြီး ဘာပြောရဲသလဲ၊ တကယ်ဆို အိန္ဒိယရဲ့ အနောက်ဘင်္ဂလားဟာ အရှေ့ဘင်္ဂလားဆိုတဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနဲ့ တနွယ်တည်းသော ဘင်္ဂါလီလူမျိုးတွေနေနေကြတာ၊ အဲဒါကမှ ဘာသာရေးပြဿနာစစ်စစ်။ ပြီးတော့ မြင့်မြတ်ရာနယ်မြေဆိုတဲ့ ဆော်ဒီကရော မွတ်ဆလင်ဘရားသားဆိုပြီး သူ့ဆီရောက်တဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေကို ကောင်းကောင်း မွန်မွန် နေရာပေးလက်ခံပါရဲ့လား။
အထက်မှာလည်း ပြောခဲ့ပြီးပါပြီ။ ခပ်ပြတ်ပြတ်ထပ်ပြောရရင် ငါ့တင်ပါးထဲ ဘယ်သူမစင်ထည့်သွားသလဲ မစဉ်းပါနဲ့။ ကိုယ့်ခန္ဓာက အပုတ်က ကိုယ့်ခန္ဓာရဲ့ ထွက်ကုန်ပါပဲ။ နိုင်ငံတကာမှာ ကျင့်သုံးတဲ့ဥပဒေက နယ်နိမိတ်စည်းခြား တရားမ၀င်ဖြတ်ကျော်ရင် ပစ်။ အတိတ်က နှစ်ပေါင်းများစွာအုပ်ချုပ်သွားတဲ့ မြန်မာအစိုးရလက်ထက်က ရခိုင်နယ်စပ်မှာ အဲသလို လုပ်ခဲ့ရင်…….။ တွေးပါ တွေးပါ။ မဆီမဆိုင်တာတွေ ထိုင်ပြောနေရင် အပျက်ပျက်နဲ့ နှာခေါင်းသွေးယိုတာပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ limitless တော့ နှစ်ဖက်စလုံးက မလုပ်မိဖို့ အရေးကြီးနေချိန်ပါ။
အဲဒီအပိုင်းအခြားထဲမှာ နေနေကြတဲ့ လူတွေဟာလည်း လူချင်းအတူတူပဲမပြောနဲ့ အမေ၀မ်းထဲက တ၀မ်းထဲ ထွက်ခဲ့ပါစေ ခံယူတဲ့ နိုင်ငံသားချင်းမတူရင် လူမျိုးကွဲပဲ။
ဘာကြောင့်ဘယ်လို west bangal (အိန္ဒိယ) နဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှတို့ နိုင်ငံ ၂ ခုခွဲထွက်နေတာတောင် လူမျိုးတူ ဘာသာရေးပြဿနာလို့ ကင်ပွန်းတပ်နေရတာတုန်း။ (ခင်ဗျား ဖွင့်ဆိုချက်အရပဲ နိုင်ငံကွဲရင် လူမျိုးကွဲပဲပေါ့။)
လူမျိုးက လူမျိုးပဲ နိုင်ငံသားက နိုင်ငံသားပဲ… နိုင်ငံသားချင်းမတူလို့လူမျိုးကွဲတယ်ဆိုတာ တော်တော်ကြီးကိုတိမ်တဲ့အတွေးအခေါ်ပဲ… race နဲ့ citizenship တောင်မခွဲခြားနိုင်လောက်တဲ့ အခြေအနေနဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့ အမြင်တွေက ဘယ်လောက်အထိမှန်နိုင်ပါဦးမလဲ???
အိန္ဒိယရဲ့ကိုင်တွယ်ပုံကိုပဲမြင်ရင် အိန္ဒိယက သူ့နိုင်ငံအဝန်းအဝိုင်းထဲက ဘင်္ဂါလီတွေကိုရော ဘယ်လိုမျိုးအခွင့်အရေးပေးထားပြီး ခိုးဝင်လာသူတွေကိုဘယ်လိုကိုင်တွယ်တာလဲဆိုတာလေး ပြောဦးမှပေါ့… မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံသားဖြစ်မှုဥပဒေက အိန္ဒိယလောက် မျှတရဲ့လား… အဲ့ဒါလေးတွေလည်း ပြန်ထည့်တွက်ဦးလေ။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးသတ်မှတ်ရေးကို လွတ်လပ်ရေးရကတည်းက ဘယ်တုန်းကများ တစိုက်မတ်မတ်လုပ်ခဲ့ပြီး ဘယ်လောက်ခိုင်မာတဲ့အချက်အလက်တွေနဲ့ အတည်ပြုပြီးပြီလဲ… သူများတွေဖြေရှင်းပုံက ပြဿနာအရှာမခံရဘူးဆိုရင် သူများတွေဘယ်လို ကိုင်တွယ်လည်းဆိုတာလေးကျတော့ ထည့်မပြောတတ်လိုက်တာဗျာ… သိပ်လည်း မျှတတဲ့အမြင်ကြီးပဲဗျ။
နှစ်ဘက်စလုံး ဒီပုတ်ထဲက ဒီပဲဆိုပေသည့် တဘက်ကတော့ ငါ့နောက်၊ ပြည်သူရှိပါလားလို့တောင်….
၁) ဒီလူတွေက အင်မတန်လည်တယ်။ ပြဿနာကို လူမျိုးရေးပုံစံမျိုးမဟုတ်ပဲ ဘာသားရေးဖိနှိပ်မှု ပုံပေါ်အောင် စနစ်တကျ မီဒီယာတွေကို ဝင်ရောက်ထိုးဖေါက်ထားတာတွေ့ရတယ်။ ဒါဟာ အခုမှမဟုတ်ပဲ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်တွေအများကြီးကတည်းက စနစ်တကျ ပလန်ချပြီး ကြိုတင်စီစဉ် ထိုးဖေါက်နေရာယူထားတာပဲ ဖြစ်ရမယ်။
၂) ဒါနဲ့ပတ်သတ်ပြီး တစ်ခုသတိရမိတာက ဒီပဋိပက္ခတွေမဖြစ်ခင် တစ်လ နှစ်လလောက်က ဗလီဆောက်တဲ့ ကိစ္စနဲ့ အငြင်းပွားမှုတွေ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေနဲ့ စီးပွားရေးအရ အငြင်းပွားမှုတွေ ဆက်တိုက်ဖြစ်ခဲ့တာဟာ တစုံတရာဟာ ဒီလမ်းကြောင်းရောက်အောင် အချိန်အတော်ကြာကြာကတည်းက စီစဉ်နေခဲ့တယ်လို့ ယူဆလောက်တယ်။
အထက်က နံပါတ်စဉ် ၁ နဲ့ ၂ ကို ချိန်သားကိုက်အောင် မညှိပဲ ရေးသားတာကတော့ စိတ်ပျက်ဖွယ်ပါပဲ။ “အချိန်အတော်ကြာကြာကတည်းက စီစဉ်နေခဲ့” နဲ့ “စနစ်တကျပလန်ချပြီး ကြိုတင်စီစဉ်” ဆိုတဲ့ စကားလုံးတွေက ထပ်တူညီပါပဲ။ အဲဒီစကားစု နှစ်ခုစလုံးအတွက်တော့ သက်သေအထောက်အထား ဗလာနတ္ထိပါ ကိုအောင်ဇင်လတ်နဲ့ အလဲဗင်းတို့ခင်ဗျား။ ခင်ဗျားတို့ဘက်မှာ နှစ်ခုစလုံးအတွက် ခိုင်မာတဲ့သံသယတွေ ရှိတယ်ဆိုရင် စာဖတ်သူကို ပိုပြီးနားလည်အောင် အထောက်အထားပေးဖော်ပြရပါလိမ့်မယ်။
ဒီကိစ္စရပ်နှစ်ခုလုံးမှန်တယ်ပဲထားအုန်း။ တဘက်က နိုင်ငံတကာမီဒီယာကို စည်းရုံးတယ်၊ တဘက်က မိမိအာဏာတည်မြဲရေးနဲ့ တပါးသူ defame ဖြစ်ရေးတို့အတွက် လိုသလိုအသုံးချဖို့ အကောက်ကြံ ပလန်ချလုပ်ကြံ တယ်။ အမေးက တိုင်းပြည်ကို အုပ်ချုပ်နေတဲ့လူကြီးမင်းတွေက တိုင်းပြည်ထဲကလူတွေအတွက် မစဉ်းစားဘဲ၊ တဘက်က နိုင်ငံတကာမီဒီယာကို မြှုနေတဲ့အချိန် ဘာလို့များအာဏာတည်မြဲရေးအတွက် အကောက်ကြံဥာဏ်စဉ်ဆွဲ၊ အကျင့်ပျက်ခြစားခဲ့ကြတာပါလိမ့်။
တလက်စတည်းထောက်ပြချင်တာက ဗလီဆောက်တဲ့ကိစ္စ၊ ဖျက်တဲ့ကိစ္စနဲ့ စီးပွားရေးပြဿနာကိစ္စတွေအားလုံးက ရခိုင်မှာ ဖြစ်ခဲ့တာမဟုတ်သလို ဘယ်မီဒီယာ ကြီးတွေကမှလည်း focus လုပ်၊ တင်ပြပေးခဲ့ကြတာမဟုတ်ဘူး။
ကိုဆိုဗို (ဘော့စနီးယား) မာဆကားမှာ ဆာ့ဘ်တွေမှန်တယ်ဆိုပဲ
အလဲဗင်းမီဒီယာဂရုနဲ့ ကိုအောင်ဇင်လတ်တို့ခင်ဗျား – ဒီလိုမျိုးဝါဒဖြန့်ချိမှုက ဘယ်လောက်ထိတာသွားနိုင်သလဲဆိုတဲ့ အကျိုးဆက်ရလဒ်ကို သတိပြုမိခဲ့ပါသလား။ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ ကလောင်တံက လူပေါင်းများစွာကို ဇီဝိန်ခြွေပြစ်လိုက်နိုင်ပါတယ်။ တာဝန်မမဲ့ကြပါနဲ့။ သွေးထိုးပေးခြင်း၊ သွယ်ဝိုက်စွာ မြှောက်ထိုးပင့်ကော်လုပ်ပေးခြင်းနဲ့ စောရလမ်းပြခြင်းမျိုးတွေကနေ ရှောင်ရှားကြပါ။
လွန်ခဲ့တဲ့ ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုနီးနီးအတွင်း မြန်မာဘာသာစကားနဲ့ အစ္စလာမ်သာသနာတော်ကို ကြမ်းတမ်းခက်ထန်စွာ အသေရေဖျက်စော်ကားနေတဲ့ အွန်လိုင်းလူရမ်းကားများ (ဥပမာ နာမည်ကျော်ပလန်းနက်ဖိုရမ်မှ အစပြုခဲ့သော အစ္စလာမ်ဆန့်ကျင့်ရေး ဖိုရမ်မာ အချို့)က အဖန်ဖန်အလီလီဆွဲငင်ယူသုံး ခဲ့ကြတာ အမေရိကန်အပါအ၀င် အနောက်နိုင်ငံတွေကတင်ပြတဲ့ အစ္စလာမ့်ဆန့်ကျင်ရေးစာပေတွေပါ၊ တဘက်သတ်ရေးထားတဲ့ သမိုင်းဖြစ်ရပ်တွေပါ။ သူတို့ဘာရေးရေး မြန်မာမွတ်စလင်မ်ကလွဲလို့ ကျန်တဲ့ လူအားလုံးက အမှန်ထင်ခဲ့တာချည့်ပဲ။
ခုများကြတော့ဗျာ။ အမေရိကန်အပါအ၀င်၊ ကုလသမ္မဂပါမကျန်၊ အနောက်နိုင်ငံအားလုံးက ကိုဆိုဗို၊ ဘော့စနီးယားသမိုင်းမှာ ဆာ့ဘ်တွေက အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် တွေကို မျိုးတုန်းသတ်ခဲ့ကြတာပါဆိုတဲ့ သမိုင်းက အလိမ်ကြီးတဲ့ဗျာ။ တယ်လည်းတတ်နိုင်၊ ရယ်စရာကောင်းပါပေ့။
အယူမှန်ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင် ဆလပ်တွေရဲ့ နေရာကို ခိုးဝင်ရောက်အခြေချလာတဲ့ အိမ်နီးနားချင်း အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် အယ်ဘေးနီးယားက တဖြေးဖြေးနဲ့ အင်အားကြီးထွားလာတော့ မူရင်းဒေသခံ ဆလပ်တွေ လူနည်းစုဖြစ်၊ အဲဒီကနေ အခု ရခိုင်ဒေသမှာလိုပဲ လူမျိုးရေးပဋိပက္ခဖြစ်တော့ အယ်ဘေးနီးယားက ပံ့ပိုးပြီး ကိုဆိုဗိုလွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော်ဆိုပြီးဖွဲ့ ဒီကနေ အယ်ဘေးနီးယား အမျိုးသားတပ်မတော်ဆိုပြီး မူလဒေသခံ ဆလပ်တွေကို သတ်တာတွေ ဖြတ်တာတွေလုပ်၊ အဲဒီတုန်းက ယူဂိုဆလားဗီးယား တစ်နိုင်ငံလုံးမှာဆို ဆလပ်တွေက လူများစု ဖြစ်ပြီး အယ်ဘေးနီးယားအနွယ်တွေက လူနည်းစုပေါ့၊ ဒါပေမဲ့ ကိုဆိုဗိုမှာကတော့ အယ်ဘေးနီးယားအနွယ်တွေက လူများစု ဆလပ်တွေက လူနည်းစု အခု ဘူးသီးတောင် မောင်းတောလိုပေါ့။
ကိုအောင်ဇင်လတ်နဲ့ တာဝန်မဲ့အလဲဗင်းတို့ သိထားတဲ့ ကိုဆိုဗိုသမိုင်းက myth ဆိုတဲ့ ဒဏ္ဍာရီတွေပါ။ ခရစ်နှစ် ၆ ရာစုအကုန်လောက်မှာ ကိုဆိုဗိုက အော်တိုမန်အင်ပါယာအောက်ရောက်နေပြီ။ သမိုင်းမှန်အရ အဲဒီအချိန်က ကိုဆိုဗိုမှာ ကက်သလစ်အလ်ဘေးနီးယန်းတွေရှိနေပေမယ့် သူတို့ပိုင် ချာ့ခ်ျတွေက ဆာဘီးယားသြသိုဒေါ့စ်ချာခ်ျတွေထက် တန်ခိုးသြဇာနည်းပါတယ်။ ကိုအောင်ဇင်လတ်ပြောတဲ့ အယူမှန်ခရစ်ယာန်ဆိုတာ ဘယ်တမျိုးလဲခင်ဗျာ။ ဆာဘီးယန်းသြသိုဒေါစ်လား၊ အလ်ဘေးနီးယန်းကက်သလစ်လား။
အဲဒီအချိန်က အလ်ဘေးနီးယန်းတိုင်း မွတ်စလင်မ်လို့ ရောထွေးပြီး လုပ်ပစ်ခဲ့တာ၊ စာဖတ်ပရိသတ်ကို လှည့်စားခဲ့တာကတော့ ပက်စက်တဲ့ ယုတ်မာမှုပဲလို့ မှတ်ချက်ပြုပါရစေ။
မဲလ်ကွန် နိုဝဲလ်ရေးသားတဲ့ ကိုဆိုဗို၊ အတိုချုန်းသမိုင်းစာအုပ်မှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။
The Bektashi order of dervishes carried outaconversion campaign which stressed the similarities between their version of Islam and Christianity.
ဘတ်တရှီသြဒါခေါ် ရှီယိုက်ဆူဖီလှုပ်ရှားမှုက ကိုဆိုဗိုမှာ ဘယ်လိုလှုပ်ရှားခဲ့သလဲ၊ ဒါရ်ဝီရ်ှလို့ခေါ်တဲ့ အစ္စလာမ်သာသနာပြုတွေက သူတို့ပုံစံ အစ္စလာမ်နဲ့ ခရစ်ယာန်အကြားတူညီမှုကို အသားပေးဖော်ပြခဲ့ပြီး သာသနာပြုခဲ့ကြတာပါ။ (Malcolm, Noel, Kosovo: A Short History, pp.124-135) ဘယ်နှယ့်လုပ် ခိုးဝင်လို့ ကိုဆိုဗိုမှာ မွတ်စလင်မ်တွေ များလာရတာလဲ။ ကိုယ့်ကလောင် ကိုယ်တာဝန်ခံရင် detail research လည်း လုပ်ဦးမှပေါ့ဗျာ။
၁၇၁၇ မှာ ဘဲလ်ဂရိတ်ကနေ အစ္စတန်ဘုလ်အထိ ဗြိတိသျှသံအမတ်ကို လမ်းပြလုပ်ပေးခဲ့တဲ့ အလ်ဘေးနီးယန်းကြီးကဆို သောကြာနေ့ဗလီတက်ပြီး တနင်္ဂနွေ ရောက်ရင် ချာ့ခ်ျတတ်သတဲ့။ (Murphy, Dervla, Embassy to Constantinople, p.102)
Albanians in Kosovo who had been passing as Muslims were declaring themselves Catholics (to avoid conscription) as late as 1845. (Malcolm, Noel, Kosovo: A Short History, pp 185-86) ကိုဆိုဗိုက အလ်ဘေးနီးယန်းတွေက မွတ်စလင်မ်တွေအဖြစ် ဘ၀ကျောင်းလမ်းနေခဲ့ကြပေမယ့် သူတို့ကိုယ်သူတို့တော့ (စစ်မှုမထမ်းရအောင်) ကက်သလစ်လို့ ၁၈၄၅ လောက်ထိ ကြေငြာခဲ့ကြတာဆိုပဲ။
ဒီတော့ကား ကိုဆိုဗိုက အလ်ဘေးနီးယန်းတွေကို ခရစ်ယာန်လို့ပြောလည်း မှန်နေမှာပဲ။ (http://en.wikipedia.org/wiki/Islam_in_Kosovo#cite_note-5 မှ ကိုးကား)
နောက်တစ်ချက်က ကိုဆိုဗိုမှာ ဆာ့ဘ်တွေ ပျောက်သွားတာမျိုး မရှိခဲ့ဘူး။ ၁၉၉၉ မွတ်စလင်မ်ဂျီနိုဆိုဒ်မဖြစ်ခင်ထိ ဆာ့ဘ်ပမာဏက များပြားဆဲပါပဲ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ –
The third myth that Malcolm tries to debunk is the celebrated migration of thousands of Serbs from Kosovo to southern Hungary at the end of the seventeenth century led by their patriarch, Arsenije III. Malcolm’s fascinating research concludes that the patriarch fled the territory without leadingamass exodus, that the numbers of Serbs who eventually landed in Hungary were fewer than Serb tradition assumes, that most of the Serb refugees were not from Kosovo, and that it was therefore not this event that caused Kosovo to be depopulated of Serbs. (http://www.ess.uwe.ac.uk/genocide/reviewy5.htm)
၇ရာစုမှာ ကိုဆိုဗိုကနေ ဟန်ဂေရီကို ထွက်သွားတဲ့ ဆာ့ဘ်အုပ်စုကြီးကို ရိုးမယ်ဖွဲ့ပြီး ကိုဆိုဗိုမှာ ဆာ့ဘ်လူဦးရေ နည်းသွားတယ်လို့ မပြောနိုင်ဘူးလို့ မဲလ်ကွန်နိုဝဲလ်ရဲ့ စာအုပ်ကို ရီဗျူးလုပ်ထားတဲ့ သောမတ်စ် အမ်းမားတ်က တင်ပြထားသဗျ။
အတိုချုန်းရရင်တော့ အော်တိုမန်အင်ပါယာ (ခရစ် ၆ ရာစု) ကတည်းက ကိုဆိုဗိုမှာ အစ္စလာမ်သာသနာဆိုတာ ရှိနေပြီးပြီ ကိုအောင်ဇင်လတ်ရ။ ပြောမယ်ဆိုရင် နောက်ပိုင်းမှ ခင်ဗျားပြောတဲ့ အစစ်အမှန်ခရစ်ယာန်တွေကြောင့် မွတ်စလင်မ်တွေ အစုလိုက်အပြုံလိုက် သေပွဲဝင်ခဲ့ရလို့ မွတ်စလင်မ်ဦးရေ ကိုဆိုဗိုမှာ ဒီထက်နည်းသွားတာပဲ။
ကိုဆိုဗိုမှာ မွတ်စလင်မ်တွေ ဆာ့ဘ်တွေနဲ့ နင်လား၊ ငါလား ခေတ်ပြိုင်ရှိခဲ့ကြတာ၊ ခိုးဝင်လာလို့ ဆာ့ဘ်တွေနေရာပျောက်တာမဟုတ်ဆိုတာ ရှင်းလောက်ပါပြီ။
၁၄ရာစုက ကိုဆိုဗိုမှာ ဆာတ့်က ၉၆.၆% အယ်ဘေးနီးယားက ၃% ပဲရှိတယ်၊ အဲ ၁၉၉၁ ရောက်တော့ အယ်ဘေးနီးယားက ၈၁.၆% နဲ့ ဆာ့တ်က ၉% ပဲ ကျန်တဲ့အထိ ပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားတယ်
ခင်ဗျားနှိုင်းယှဉ်ပုံကလည်းဗျာ။ ၁၄ ရာစုနဲ့ ၂၀ ရာစု၊ အတော်လည်း နီးနိုင်လွန်းပါတယ်။
ကိုအောင်ဇင်လတ်ရေးခဲ့တဲ့ ၁၄ ရာစုမှာ ဆာ့ဘ်ဘယ်လောက်၊ ၁၉၉၁ မှာ ဘယ်လောက်ပဲကျန်တော့တယ်ဆိုတာက အလ်ဘေးနီးယန်း တွေ ခိုးဝင်လာလို့၊ တိုက်ထုတ်လိုက်လို့မှ မဟုတ်တာပဲ။ အလ်ဘေးနီးယန်းတွေကိုယ်တိုင် ကျင့်သုံးတဲ့ အစ္စလာမ်ဝါဒက ခရစ်ယာန်နဲ့ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်နေမှာတော့ ကက်သလစ်နဲ့ သြသိုဒေါစ်ညိတာကို မဆီမဆိုင် မွတ်စလင်မ်ကို ဘယ်ကြားထဲ ထည့်လိုက်ရတာတုန်း။
၁၉၉၁ သန်းခေါင်စာရင်းကို ကြည့်ရင် ဒီလိုတွေ့ရပါတယ်။
အလ်ဘေးနီးယန်းတွေ ဘွိုင်ကောက်လုပ်ခဲ့တဲ့ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ၁၉၉၁ မှာ ဒီလို –
နောက်ပိုင်းပြင်ဆင်နဲ့ ၁၉၉၁ သန်းခေါင်စာရင်းက ဒီလို –
အဲဒါပေမယ့်ပြင်ဆင်ချက်ကို အမှန်လို့ မယူကြဖို့ ၀ီကီက သတိပေးထားသဗျ။ ဒီတော့ကား ဘယ်မလဲ မွတ်စလင်မ်အရေအတွက်က ဆာ့ဘ်ထက်ပိုများပါတယ်ဆိုတဲ့ အထောက်အထား။ အလ်ဘေးနီးယန်းတိုင်း မွတ်စလင်မ်မဟုတ်ဆိုတာ သတိလေးတော့ ချပ်ခဲ့သင့်တာပေါ့ဗျာ။
မဲလ်ကွန် နိုဝဲလ်ရေးသားတဲ့ A Short History သမိုင်းစာအုပ် ခုလို မှတ်ချက်ပေးထားပါသေးတယ်။
“There have been many battles and wars in Kosovo over the centuries, but until the last 100 years or so none of them had the character of an ‘ethnic’ conflict between Albanians and Serbs.” (Kosovo, A Short History page. xxix)
(၂၀ ရာစု အတွင်း) ကိုဆိုဗိုမှာ စစ်ပွဲတွေအများကြီးဖြစ်ခဲ့တာပေါ့၊ ဒါပေမယ့် လွန်ခဲ့နှစ် ၁၀၀ အတွင်း သို့မဟုတ် အဲလောက် အချိန်အထိ အလ်ဘေးနီးယန်းတွေနဲ့ ဆာ့ဘ်တွေအကြား လူမျိုးရေး ပဋိပက္ခ၊ နှစ်ဘက်စလုံးမှာ မရှိခဲ့ဘူးတဲ့ဗျာ။ အတုယူစရာပေါ့ဗျာ။
သမိုင်းစာအုပ် ခုလို ၁၉၈၁ မှာ အလ်ဘေးနီးယန်းကျောင်းသားတွေက နိုင်ငံရဲ့ဆင်းရဲမွဲတေမှု၊ ကျောင်းပြီးအလုပ်မရှိမှုနဲ့ အလုပ်လက်မဲ့မြင့်မားမှုတွေ ကြောင့် ဆန္ဒပြကြတယ်။ နောက်တော့ ဆူပူသောင်းကျန်းမှုအသွင်ဖြစ်သွားပြီး လူပေါင်း ၂ သောင်းလောက်ပါဝင်လာတယ်။
ကိုအောင်ဇင်လတ်ရေ၊ ဒီနေရာမှာ ခင်ဗျားပြောသလို ဆာ့ဘ်တွေဘက်က ထိခိုက်နစ်နာမှု၊ ခွဲခြားခံရမှုတွေ ရှိခဲ့ပါတယ်။ သို့သော် အဲဒီအချိန်က ကိုဆိုဗိုကို အုပ်ချုပ်နေတာ ကွန်မြူနစ်အစိုးရ၊ ယူဂိုဆလပ်အစိုးရလေဗျာ။
Perhaps the most politically explosive complaint leveled by the Kosovo Serbs was that they were being neglected by the Communist authorities in Belgrade. (New York Times 1987-06-27, “Belgrade Battles Kosovo Serbs”)
ကိုဆိုဗိုဆာ့ဘ်တွေ အပေါက်ကွဲဆုံး စောဒကတက်ခဲ့ကြတာက သူတို့ကို ဘဲဂရိတ်အာဏာပိုင် ကွန်မြူနစ်တွေက လျစ်လျူပြုခဲ့တာကိုပါ။
In August 1987, during the dying days of Yugoslavia’s Communist regime, Kosovo was visited by Slobodan Milošević, thenarising politician. He appealed to Serb nationalism to further his career. Having drawn huge crowds toarally commemorating the Battle of Kosovo, he pledged to Kosovo Serbs that “No one should dare to beat you”, and became an instant hero of Kosovo’s Serbs. By the end of the year Milošević was in control of the Serbian government. (Wiki – http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Kosovo#cite_note-nyt19870627-28)
၁၉၈၇ သြဂုတ်လ မှာတော့ ကိုဆိုဗိုကို ဆလိုဘိုဒန် မီလိုဆီဗစ် (ယူဂိုဆလပ် ဆိုရှယ်လစ် ၀န်ကြီးချုပ်) လာလည်ပြီး ဆာ့ဘ်တွေကို တောင်းပန်ခဲ့တယ်။ ဆာ့ဘ်တွေကို သူက “ဘယ်သူမှမင်းတို့ကို မရိုက်ရဲစေရဘူး” လို့ ကတိတောင်ပေးလိုက်သေး။ ပြီးတော့မှ သူက ဆားဘီးယန်းအစိုးရကို ထိန်းချုပ်တော့တာပဲ။ (ဆာ့ဘ်လို လူမျိုးက သူမကျူးလွန်တဲ့ကိစ္စအတွက် သူတာဝန်ခံပြီး တောင်းပန်မှာတော့ မဟုတ်လောက်။)
ကိုအောင်ဇင်လတ်ရေ၊ ဘယ်မှာလည်း ခင်ဗျားပြောတဲ့ အလ်ဘေးနီးယန်းမွတ်စလင်မ်တွေ တပ်တွေဖွဲ့တိုက်ထုတ်လို့ ထွက်ပြေးသွားရတဲ့ ဆာ့ဘ်တွေအကြောင်း။ ဆာ့ဘ်တွေကို လုပ်ခဲ့တာ ကွန်မြူနစ်ယူဂိုဆလပ်အစိုးရခင်ဗျ။
ဒါပေမဲ့ ရခိုင်တပ်တွေအနေနဲ့ မျိုးချစ်စိတ် ပြင်းထန်လွန်းတော့ မီလိုဆီဗစ်နဲ့ သူတပ်တွေ ခံသွားရသလို အဖြစ်မျိုး မကြုံအောင် အတော်လေးသတိထားရမယ်၊
ကဲဒီလိုဆို မီလိုဆီဗစ်ကြီးဘက်က အခမဲ့ရှေ့နေလိုက်ပေးပြီး လူသတ်ပွဲကြီးကို တရားမျှတပါတယ်၊ ရခိုင်မှာလည်း ဒါမျိုးလုပ်သင့်ပါတယ်လို့ သွယ်ဝိုက်စွာရေးသားခဲ့တဲ့ ကိုအောင်ဇင်လတ်ခင်ဗျား။ ခင်ဗျားရေး self written က ၂၀၀၇ ဖေဖော်ဝါရီက နိုင်ငံတကာတရားရုံးဆုံးဖြတ်ချက် (ICJ ဆုံးဖြတ်ချက်) ကို ဘယ်ဂုဏ်ကြောင့် ၀ံ့သတုန်း ကြည့်၊ ကြည့်မယ်ဗျာ။
The Court concludes that the acts committed at Srebrenica falling within Article II (a) and (b) of the Convention were committed with the specific intent to destroy in part the group of the Muslims of Bosnia and Herzegovina as such; and accordingly that these were acts of genocide, committed by members of the VRS in and around Srebrenica from about 13 July 1995.(http://www.icj-cij.org/docket/files/91/13685.pdf – The Hague, 26 February 2007, p. 108, paragraph 297.)
အတိုချုန်းရရင် ၁၃ ရက် ဇူလိုင် ၁၉၉၅ လောက်ကနေ ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ (မွတ်စလင်မ် များကို သတ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ လူသတ်ပွဲကြီးက) ဂျီနိုဆိုဒ်၊ မျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်ပွဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်လို့ ကမ္ဘာ့တရားရုံးက ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသတဲ့။ ဟိတ်ဂ်မြို့က အိုင်စီဂျေ ၀က်ဘ်ဆိုဒ်၊ ဒီမှာပါ – http://www.icj-cij.org/ ကိုအောင်ဇင်လတ် ဆက်သွယ်ပြီး စောဒက တက်မယ်ဆိုရင် အရံသင့် သုံးနိုင်အောင်လို့ပါ။ (ကျေးဇူးတင်စရာမလိုပါ။)
အားနည်းရာကို ဂရုဏာသက်လေ့ရှိတဲ့ မီဒီယာတွေ လူ့အခွင့်ရေးသမားတွေကို လွှမ်းမိုးပြီး နိုင်ငံတကာအသိုင်းအ၀န်းဟာ ကိုဆိုဗိုစစ်ပွဲကို အယ်ဘေးနီးယားနဲ့ ဆာ့တ်တွေရဲ့ လူမျိုးရေး ပြဿနာရယ်လို့ မမြင်တော့ပဲ မွတ်ဆလင်လူနည်းကို ခရစ်ယာန်လူများစုက အနိုင်ကျင့်နှိပ်စက်တယ်လို့ မြင်ခဲ့ကြတယ်။
မီဒီယာဆိုတာ အားနည်းရာကို ကရုဏာသက်တတ်တယ်တဲ့လားဗျာ။ အဲ- မြန်မာ့နံပါတ် ၁ မီဒီယာကတော့ အမှန်တရားဆိုရင် ကြားမနေပေါင်တဲ့ဗျား။
ကဲ – အလဲဗင်းနဲ့ ကိုအောင်ဇင်လတ်ရေ၊ ကိုဆိုဗိုစစ်ပွဲမှာ ဆာ့ဘ်တွေကို နိုင်ထက်စီးနင်းလုပ်ခဲ့တာ ဘယ်သူတွေလဲ၊ မွတ်စလင်မ်တွေကို အစုလိုက် အပြုံလိုက် မျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်တာဘယ်သူလည်း ရှင်းပါပြီနော်။
ဒီတော့ကား ခင်ဗျားတို့ နှစ်ပါတီ ပူးပေါင်းပြီး ရိုးသားလှတဲ့ မြန်မာပြည်သူလူထုကို တဘက်လက်နဲ့ လှည့်စား၊ သမိုင်းလိမ်ကို တင်ပြ၊ မွတ်စလင်မ်ဆို မုန်းတီးအောင်လှုံဆော် ၊ ဒါတင်တင်မက မြန်မာပြည်တွင်း ဂျီနိုဆိုဒ်ဖြစ်လာအောင် သွယ်ဝိုက်ဝါဒဖြန့်ချိလေတော့ သမိုင်းမှာ အမဲစက်အကြီးကြီး စွန်းထင်းမလာနိုင်ဘူးလို့ ခင်ဗျားတို့ အာမခံနိုင်လို့လား။ ဒါဟာ အလွန်အင်မတန် အန္တရာယ်များတဲ့ ၀ါဒဖြန့်ချိမှုဆိုတာ မီဒီယာကြီးတစ်ခု လုပ်နေပြီး သတိမထားမိလေရော့သလား။ ခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင် ရခိုင် (ဗုဒ္ဓ) တွေ သွေးဆူတယ်လို့ အောက်ပါအတိုင်း ၀န်ခံထား (သိထား) ပြီးမှ ဘာလို့ ဒီလို ၀ါဒဖြန့်ချိပါသလဲ။
ရခိုင်တွေသာ နယ်ခြားစောင့်တပ်အဖြစ် နယ်ခြားကို စောင့်ရှောက်ရရင် မျိုးချစ်စိတ်အပြည့်နဲ့မို့ နယ်ခြားကနေ အကျင့်ပျက်ခြစားမှုကို ဂယ်ပေါက်တစ်ခုလိုအသုံးချပြီး ခိုးဝင်မဲ့ကိစ္စမျိုး မဖြစ်နိုင်တော့ဘူး။
တာဝန်မဲ့ ၀ါဒဖြန့်ချိမှု အလိုမရှိ။
ကျွန်တော်ရေးသားတင်ပြဖူးတဲ့ The most successful propaganda technique ဆိုတာလေး ပြန်တင်ပြပြီး နိဂုံးကမ္ပ အဆုံးသတ်ပါရစေ။ (http://www.freerepublic.com/focus/f-news/1530401/posts)
နံပါတ် ၃ မှာ ပြောထားတာက
# 3. Misinformation: This isasubtle technique, it involves reporting information in suchaway that the final message of the story is not true, it’s what the propagandist wants you to believe.
ဒီတော့ အလဲဗင်းက ကိုအောင်ဇင်လတ်မှတ်စုကို တင်ပေးလိုက်အပြီး ဖြစ်ပျက်လာတဲ့ မုန်းတီးမှုအခြေခံ အစပျိုးမှု၊ ဆဲရေးမှု၊ လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုတွေ ကိုဘယ်သူတာဝန်ယူပေးမလဲ စောင့်ကြည့်ပါရစေ။
အမုန်းတရားများ ကင်းဝေးကြပါစေ။ မမှန်သတင်း ၀ါဒဖြန့်ချိခြင်းမှ ရှောင်ရှားနိုင်ကြပါစေ။
This entry was posted on July 24, 2012 at 3:51 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.
9 Responses to “Genocide incitation or ဂျီနိုဆိုဒ်အတွက် တဘက်လှည့်သွေးထိုးမှုကြီး”
July 24, 2012 at 4:09 am | Reply
နိုင်ငံတော်သမတရုံးတာဝန်ရှိသူတစ်ဦး HMU ZAW ၏ သဘောထား
တိုက်ဆိုင်မှု မဟုတ်တော့ဘဲ စီမံကိန်းချ၍ တိုက်ခိုက်ထိုးနှက်မှုများ အဖြစ်သို့ ရောက်ရှိလာသော ခြိမ်းခြောက်မှုများ…
googling လုပ်ရင်း မြန်မာအကြောင်း သတင်းတွေ ကြည့်လိုက်တိုင်းမှာ စုပြုံတက်လာတဲ့ သတင်းတွေက ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးရဲ့ UNHCR မဟာမင်းကြီးနဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့စဉ် ပြောခဲ့တဲ့စကားကို ဝေဖန်တိုက် ခိုက်နေကြတဲ့ သတင်းတွေ၊ သမ္မတကြီးရဲ့ ဓါတ်ပုံ၊ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အထွဋ် အမြတ်ဖြစ်တဲ့ နိုင်ငံတော်အလံ၊ ဒီဟာတွေကို မဖွယ်မရာတွေ ပြုလုပ်၊ မီးရှို့ ပြနေကြတဲ့ သတင်းတွေ ပလူပျံအောင် တွေ့ရပါတယ်။
July 24, 2012 at 4:14 am | Reply
M Thit Sar
ဒါဟာ ဘာသာရေးနဲ့ မဆိုင်ပါဘူး။ ပြည်တွင်းမှာ တရားဝင်နေထိုင်လာခဲ့ကြတဲ့ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေနဲ့ မဆိုင်ပါဘူး။ ပြောရရင် ကမ္ဘာပေါ်မှာ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံ၊ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေဟာ မေတ္တာတရားရဲ့ အရိပ်အာဝါသ၊ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုနဲ့ ဓလေ့ထုံးတမ်းရဲ့ အဆုံးအမတွေနဲ့ ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့တဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းကို ဆက်ခံခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာ လွတ်လပ်စွာကိုးကွယ်ခွင့်ကို အာမခံထားသလို ကျွန်တော်တို့ မြေမှာ စေတီပုထိုးကျောင်းကန်တွေသာ မက ချာ့ခ်ကျောင်းတွေ၊ ပလီတွေ တည်ရှိနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ကိုယ်တိုင်လည်း ဖြစ်ပြီးသမျှတွေကို ရှုမြင်ရာမှာ ဘာသာရေး လို့ မမြင်ကြပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့မှာ ခွဲခြားမြင်နိုင်တဲ့ အသိတရား၊ ဘာသာတရားရဲ့ အဆုံးအမတွေ ရှိနေပါတယ်။ ဒီအပိုဒ်လေးကိုယ် သဘောကျပါတယ် ဒါတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဘယ်သူက ဘာတွေလုပ်ပေး လို့လည် လက်ရှိရခိုင်မှာ ဖြစ်နေတာနဲ့ ပတ်သက်လို့ ရိုဟင်ဆိုပြီး ကွဲကွဲ ပြာပြာ မလုပ်ဘဲ အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်အားလုံး ကိုယ် တိုက်ခိုက် ခဲ့တယ် လက်ရှိ ရခိုင် ပြည်နယ် မှာ ရှိနေတဲ့ မွတ်ဆလင် အားလုံးက ရိုဟင်ဂျာတွေ လာ မြန်မာနိုင်ငံသားတယာက် မှ မရှိတော့ဘူးလာ လက်ရှိ ရခိုင် ပြည်နယ်မှာ ရှိနေတဲ့ မွတ်ဆလင်တယောက် ငွေရှိယုံနဲ့ ဘာမှ ၀ယ်စားလို့ မရ ပါ မွတ်ဆလင်တွေအတွက် အကူဆိုဝေး မှဝေပါ ဒါတွေက အမှန်တရားတွေလာ ခင်ဗျာတို့ ကိုယ်တိုင်လည်း မကူညီ မိမိ ငွေနဲ့ ၀ယ်စားတော့လည် ရောင်ခွင့် မရလို မရောင်းရဲးကြဘူး ဒါတွေက မွတ်ဆလင်လူမျို အာလုံး မြန်မာနိုင်ငံ မှာ မနေ နိုင်အောင် လူမျို ပြုန်း သတ်ဖြတ်တိုင်ခိုက်နည်း တမျိုးပါ
န၀တ/နအဖ ခေတ်မှာ ကုလား
Divide and Rule က ကျန်တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့အတူတူခံစားနေရဆဲပဲ
ဒီကိစ္စတွေကို နိုင်ငံသားတယောက်ရဲ့အခွင့်အရေးနဲ့ အညီရပါစေမယ်လို့
ခင်ဗျားတို့ ပြောဖို့မလိုအောင် တိုင်းပြည်ကိုချစ်ကြပီးသား
ဗမာပီပီ သွေးနီးကြောင်း ခင်ဗျားတို့ကသာ စ လိုက်ပါ…
နောက်က တညီတညာတည်းပါရ ပါစေမယ်…
နိုင်ငံတော် သမ္မတကြီးကို လေးစားယုံကြည်သလို
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို မျှော်လင့်သလို
ခင်ဗျားတို့ တသက်လုံး ယူထားကြတာပါ…
ခင်ဗျားတို့ရှေ့က ထွက်ရပ်ဖို့အဆင်သင့်ဘဲလို့ ရဲရဲကြီးပြောလိုက်ပါရစေ…
July 24, 2012 at 4:16 am | Reply
ဆာ့ဘ်တွေလုပ်ခဲ့တဲ့ ကိစ္စမှန်တယ်လို့ လက်ခံသူတွေများလာရင် ဟစ်တလာလုပ်ခဲ့တာမှန်တယ်လို့ လက်ခံလာဖို့ သိပ်မလိုတော့ပါဘူး။ တစ်ခုတော့ သတိရဖို့က နိုင်သူစားစတမ်းဆိုတာ law of jungle ပါ။ အဲဒါကြီးမှ ကြိုက်တာဆိုရင် တစ်ချိန်ကိုယ်လဲ ဒီ law of jungle နဲ့ပဲ ပြန်စီရင်ခံရပါလိမ့်မယ်။
July 24, 2012 at 4:20 am | Reply
အလ္လာဟ် အရှင်မြတ်ကိုစော်ကား ၊ တမန်တော်မြတ် (ဆွ)
ကိုစော်ကား၊ သာသနာ တစ်ခုလုံးနဲ့ အုမ္မသ် ကိုစော်ကား
သူတွေ အပေါ် ဆွဗရ် လုပ်စရာ၊ ခွင့်လွှတ်စရာ ဘာအကြောင်း
မှ မရှိပါဘူး။ ဒီမှာကြည့် အလ္လာဟ် အရှင်မြတ် ကမေးထားတယ်။
ဘာလဲမင်းတို့ကြောက်နေတာလား တဲ့။ ဘယ်လိုဖြေကြမှာလဲ?
ကတိသစ္စာကိုလည်း ဖောက်ဖျက်ခဲ့ကြကုန်၏။ ထို့ပြင်၎င်း
တို့သည် တမန်တော်မြတ်(မုဟမ္မဒ်)အား(မက္ကာမြို့ မှ) နှင်
ထုတ်ရန်လည်း သန္ဓိဋ္ဌာန်ချခဲ့ကြကုန်၏။ ထိုမှတစ်ပါး ၎င်း
တို့သည်ပင်လျှင် အသင်တို့အား ဦးစွာပထမ စတင်တိုက်
ခိုက်ခဲ့ကြကုန်၏။ အသင်တို့သည် ၎င်းတို့အားကြောက်ရွံ့
ကြလေသလော၊စင်စစ်တမူကား အကယ်၍ အသင်တို့သည်
အရှင်မြတ်အား ပိုမို၍ပင် ကြောက်ရွံ့ထိုက်ပေသတည်း။”
July 24, 2012 at 4:30 am | Reply
This is the record and proof of one monk who should be the future candidate for ICC trial for this excellent Hate Speech
ဆရာတော် အရှင်”ဝီရသူ သဘောထား ၇/၇၄”နှင့် မိုးမခမီဒီယာ ရပ်တည်ချက်..
အရှင်ဝီရသူ၊ ဇူလိုင် ၂၁၊ ၂၀၁၂
၁၃၇၄-ခု ဒုတိယဝါဆိုလဆန်း(၇) ၂၀-၇-၂၀၁၂-သောကြာနေ့
မောင်တောမြို့နယ်မှ စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့သော ရခိုင်အရေးခင်းနှင့် ပတ်သက်၍ မန္တလေးမြို့၊ မစိုးရိမ်တိုက်သစ်၊ ဓမ္မသဟာယကျောင်းနာယက ဘဒ္ဒန္တဝိစိတ္တာဘိဝံသ.အရှင်ဝီရသူ(မစိုးရိမ်)၏ သဘောထားအမှန်ကို ထုတ်ပြန်ကြေညာ အပ်ပါ သည်။
(က) ၈-၆-၂၀၁၂-ရက်နေ့မှ စ၍ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မောင်တောမြို့တွင် တစ်ပြိုင်တည်း ဖြစ်ပွားခဲ့သော အရေးခင်းသည် ရခိုင်ကုလား အဓိကရုဏ်းလည်း မဟုတ်ပါ။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နှင့် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တို့ အကြားဖြစ်ပွားသော ဘာသာရေးပဋိပက္ခ လည်း မဟုတ်ပါ။ အမှန်အားဖြင့် အစွန်းရောက် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် စစ်သွေးကြွများ ယုံကြည်လက်ခံထားသည့် ဂျီဟတ်စစ်ပွဲသာ ဖြစ်ပါသည်။
(ခ) ၃-၆-၂၀၁၂-မှ ၈-၆-၂၀၁၂-အထိ ရက်ပိုင်းအတွင်းသာကြာလိုက်သော တောင်ကုတ်အရေးအခင်းကို အကြောင်းပြု၍ မောတော၊ စစ်တွေ၊ ရသေ့တောင်မြို့နယ်တို့တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော အရေးခင်းကို လူမျိုးရေး အဓိကရုဏ်းဟု ဆိုဖွယ်ရှိသော်လည်း အကြမ်းဖက် ဘင်္ဂါလီကုလားများသည် ဟိန္ဒူလူမျိုးစုတို့၏ အသက်အိုးအိမ် စည်းစိမ်ကိုပါ ပြောင်ပြောင်တင်းတင်း ပစ်မှတ်ထား၍ ကျူးကျော်တိုက်ခိုက်ကြသည်ကို တွေ့ရသောကြောင့် ရခိုင်-ကုလား လူမျိုးရေးအဓိကရုဏ်းမဟုတ်ဟု ဆိုခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မှန်ပါသည်။ ဘင်္ဂါလီကုလားများကို ကာယကံ ဝစီကံတို့ဖြင့် မည်သို့မျှ စော်ကားပြစ်မှားခြင်း မရှိခဲ့သော ဟိန္ဒူလူမျိုးများကိုပါ ပစ်မှတ်ထား၍ တိုက်ခိုက်ခြင်းကြောင့် ရခိုင်-ကုလား လူမျိုးရေးအဓိကရုဏ်း မဟုတ်မှန်းသိသာ ထင်ရှားပေသည်။
(ဂ) အစွန်းရောက် စစ်သွေးကြွ အကြမ်းဖက် သောင်းကျန်းသူ ဘင်္ဂါလီကုလားများသည် ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်၏ မျက်နှာတော်ကို ကျဆုံးသူ ရခိုင်သွေးဖြင့် သုတ်လိမ်းသွားခြင်း၊ ကျောက်ဆင်းတုများ၏ ဦးခေါင်းတော်ကို ဖြတ်တောက်သွားခြင်း၊ ကြေးဆင်းတုတော်များကို မီးတိုက်ခြင်း၊ နားရွက်တော်ကို ဓားဖြင့်ခုတ်ဖြတ်ခြင်း၊ ဘုန်းတော်ကြီးများကို သတ်ဖြတ်ခြင်း၊ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများကို မီးရှို့ခြင်းစသည့် အဓမ္မလုပ်ရပ်များကို ကြည့်လျှင် ဘာသာရေးပဋိပက္ခဟု ထင်ရဖွယ်ရှိသော်လည်း အကြမ်းဖက်ဘင်္ဂါလီကုလားများသည် နစက ရုံးများ၊ စာသင်ကျောင်းများ၊ ဆေးရုံဆေးခန်းများကိုပါ ပစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခြင်း၊ ရဲစခန်းဝင်စီး၍ လက်နက်လုခြင်း၊ ပြည်ပမှလက်နက်များ စုဆောင်းထားခြင်းများ ပြုလုပ်လာကြသောကြောင့် ဘာသာရေးပဋိပက္ခ မဟုတ်ဟု ဆိုခြင်းဖြစ်ပါသည်။
(ဃ) အမှန်အားဖြင့် ရခိုင်အရေးခင်းသည် မောင်တော၊ ဘူးသီးတောင်၊ စစ်တွေမြို့တို့ကို အပိုင်ကြံသော ရခိုင်ပြည်သိမ်းတိုက်ပွဲ (သို့မဟုတ်) အစ္စလာမ်မစ်စတိတ် ထူထောင်လိုသော ဂျီဟတ်ဝါဒီ ဘင်္ဂါလီအကြမ်းဖက် စစ်သွေးကြွများ ဆင်နွှဲသည့် ဂျီဟတ်စစ်ပွဲသာ ဖြစ်ပါသည်။
ဂျီးဟတ်စစ်ပွဲဖြစ်ကြောင်း ရခိုင်ပြည်သူများ သိမ်းဆည်းရမိသော အချက်အလက်များ၊ ဘင်္ဂါလီကုလားများ၏ မျှော်စင်ဗလီပေါ်မှ အသံချဲ့စက်ဖြင့် ပြိုင်တူအမိန့်ပေးသော စကားများ၊ မော်လဝီဆိုသူ ခေါင်းဆောင်များ၏ ပြောစကားများ၊ ထောင်သောင်းချီ၍ ချီတက်လာသော ကုလားအုပ်ကြီး၏ တပ်လှန့်ကြွေးကြော်သံများကို ကြည့်က သိနိုင်ပါသည်။
ထို့ကြောင့် ရခိုင်အရေးခင်းသည် အများပြည်သူများ ထင်ထားသလို လူမျိုးရေးအဓိကရုဏ်းလည်း မဟုတ်ပါ။ ဘာသာရေးပဋိပက္ခလည်းမဟုတ်ပါ။ အစ္စလာမ်မစ်စတိတ်ထူထောင်ချင်သော စစ်သွေးကြွ အကြမ်းဖက်ဘင်္ဂါလီကုလားများ၏ ဂျီဟတ်စစ်ပွဲသာ ဖြစ်သည်ဟု ဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
(င) ရခိုင်အရေးခင်း၌ အဓိကတာဝန်ရှိသော နစကကွပ်ကဲရေးမှူး ဗိုလ်မှူးကြီးအောင်ကြီးနှင့် တပ်ဖွဲ့ဝင်တို့၏ ပေါ့လျော့မှု၊ ညံ့ဖျင်းမှု၊ သစ္စာဖောက်မှုတို့ကြောင့် ရခိုင်ပြည်သူများသည် သွေးဆာနေသော လူရမ်းကားအကြမ်းဖက်သမားများ၏ ဒဏ်ကို ခါးစီးခံခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ထို့ကြောင့် ရခိုင်ပြည်နယ်အတွက်သာ မဟုတ်ဘဲ မြန်မာတစ်ပြည်လုံးအတွက်ပါ အရေးပါသော ရခိုင်ခံတပ်ခေါ် ပြည်ထောင်စု တံခါးကြီးလုံခြုံရေးအတွက် မျိုးချစ်စိတ်ဓာတ်၊ ပြည်ထောင်စုစိတ်ဓာတ် အပြည်အဝရှိသော ဝန်ထမ်းကောင်းများ ကိုသာ ရွေးချယ်ခန့်ထားဖို့ လိုကြောင်းနှင့် ရခိုင်ပြည်လုံခြုံရေး၊ အမျိုးသားလုံခြုံရေး၊ တိုင်းရင်းသားနှင့် အပြစ်မဲ့ပြည်သူများ၏ အသက်အိုးအိမ် စည်းစိမ်တို့ လုံခြုံရေးအတွက် စိတ်ချယုံကြည်လောက်သော အစီအမံကောင်းများ စီစဉ်ပေးဖို့ လိုအပ်ပါသည်။
(စ) ဒုက္ခသည် စခန်းများ၌ မီးလောင်အဖျက်ဆီးခံရသော ရခိုင်ပြည်သူများ၊ အထူးသဖြင့် သေဆုံးသွားသူတို့၏ မိသားစုများ စိတ်ဓာတ်ခွန်အား ပြည့်ဝစေဖို့ စိတ်ဓာတ်မြှင့်တင်ပေးရန် အထူးလိုအပ်လှပါသည်။
(ဆ) ရခိုင်ပြည်သူများတွင် ကုလားမရှိသော မြို့ရွာများမှာသာ နေလိုကြသူများ၊ လုံခြုံရေးအပြည့်အဝပေးလျှင် ရွာပြန်နေမည်၊ အားကိုးရလောက်သည့် လုံခြုံရေး မပေးနိုင်လျှင် လုံးဝပြန်မနေလိုကြသူများ၊ မိဘများခေါင်းချသွားရာ အရပ်မှာပဲ သေချင်သေပါစေ ပြန်နေပါမည် ဆိုသူများရှိရာ အစိုးရအနေဖြင့် တိုင်းရင်းသားစစ် ရင်သွေးစစ်များ၏ ဆန္ဒကို မိခင်စိတ်အပြည့်အဝထား၍ ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့လိုအပ်ပါသည်။
(ဇ) ကုလားရွာများကြားတွင် ပိတ်မိနေသော ရခိုင်ရွာများ၊ နတလရွာများတွင် ပြည်သူများသည် အပြင်လည်းအထွက်ရဲ၊ မြို့လည်းမတက်ရဲဘဲ ရိက္ခာပြတ်လပ်နေသော ဒုက္ခသည် စာရင်းမဝင်သော ဒုက္ခသည်များ ဖြစ်နေကြပါသည်။ အစိုးရ၏ အထောက်ပံ့ကိုလည်း မရ၊ NGO-တို့၏ အထောက်ပံ့ကိုလည်း မရ၊ မည်သည့်အထောက်ပံ့ကိုမျှ မရလျှင် ရေရှည်ရပ်တည်ဖို့ ခဲယဉ်းနေသော ထိုကျေးရွာများအတွက် ထည့်၍စဉ်းစား စီစဉ်ပေးဖို့ လိုပါသည်။
(ဈ) ဟိန္ဒူလူမျိုးများသည် ဘင်္ဂါလီမူဆလင်ကုလားတို့၏ ပစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်မှုကိုလည်း ခံရ၊ တိုင်းရင်းသားမဟုတ်၍ ပစ်ပယ်မှုကိုလည်း ခံနေရပါသည်။ အချို့ဟန္ဒူလူမျိုးများမှာ မူဆလင်ကုလားများနှင့် ရောကာရွှေ့ပြောင်းခံရသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ နွားကိုးကွယ်သူနှင့် နွားသတ်သူတို့ကို အတူယှဉ်တွဲထားပါက အင်းအားနည်းသည့် ဟိန္ဒူလူမျိုးတို့သာ အနိုင်ကျင့်ခံရမည် ဖြစ်ပါသည်။
ထို့ကြောင့် ကုလားများနှင့် ရောပါသွားသော ဟိန္ဒူလူမျိုးများကို အမြန်ဆုံးခေါ်ထုတ်ဖို့ လိုအပ်ကြောင်းနှင့် ဟိန္ဒူလူမျိုးတို့၏ ဒုက္ခကို တိုင်းရင်းသားတို့၏ ဒုက္ခလိုသဘောထားပြီး အလျင်အမြန် ကယ်တင်ဖို့ အကြောင်းသိစေအပ်ပါသည်။
(ည) ကျေးရွာများပြန်လည်တည်ဆောက်ရာတွင် လူနေအိမ်များကိုသာ စနစ်တကျ မြေပုံကြမ်းဆွဲ၍ တည်ဆောက်ဖို့ပြင်ဆင်နေသော်လည်း မီးရှို့ခံရသော ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများအတွက် မည်သည့်လုပ်ဆောင်ချက်၊ ပြောဆိုချက်ကိုမျှ အတွေ့ရှိရသေးပါ။ ဝါဆိုဖို့နီးကပ်နေသော်လည်း ဒုက္ခသည်ဘုန်းတော်ကြီးများ၏ အနာဂတ်မရေရာ အသေချာ သေးပါ။
ထို့ကြောင့် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများအတွက် ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောင်ရွက်ပေးဖို့ အထူးလိုအပ်လှပါသည်။
(ဋ) UN-လက်အောက်ခံ NGO-များ INGO-များသည် ကုလားရွာများအတွက်သာ ငွေကြေးသုံးစွဲနေပြီး ရခိုင်ပြည်သူတို့ အရေးကို အနည်းငယ်မျှပင် ထည့်သွင်းစဉ်းစားမှု မရှိပါ။ အကြမ်းဖက် အစွန်းရောက်များသည် UN-လက်အောက်ခံ အဖွဲ့စည်းများကို အသုံးချကာ ဂျီဟတ်စစ်ပွဲကို ဆင်နွှဲသွားခဲ့ကြသောကြောင့် UN-လက်အောက်ခံ အဖွဲ့အစည်းများကိုယ်တိုင် လူမိုက်အားပေးလုပ်နေခြင်း၊ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများနှင့် ဟိန္ဒူအရေးကို ပစ်ပယ်ထားခြင်း၊ တရားမျှတမှုမရှိခြင်းကို တွေ့မြင်ခဲ့ရပေသည်။
ထို့ကြောင့် တရားမျှတမှုမရှိသော၊ လူမိုက်အားပေးလုပ်နေသော UN-လက်အောက်ခံ အဖွဲ့အစည်းများကို ပြင်းထန်စွာ ရှုတ်ချအပ်ပါသည်။
(ဌ) ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံသည် လူမြင်ကောင်းအောင် ဘင်္ဂါလီဒုက္ခသည်များကို လက်မခံဘဲ ဟန်ဆောင်လုပ်ပြနေသော်လည်း ရခိုင်အရေးခင်းတွင် အဓိကတရားခံများဖြစ်သော ရိုဟင်ဂျာဆိုသူ စစ်သွေးကြွများကို တိတ်တစ်ဆိတ်လက်ခံဝှက်ထားပေးနေ သည်ဟု ရခိုင်ပြည်သူတို့ သည့်မြင်ခံစားနေရပါသည်။
ထို့ကြောင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံသည် အိမ်နီးချင်းကောင်းပီသစွာ အစွန်းရောက် အကြမ်းဖက်သမားများကို နှိမ်နှင်းဖို့ အတွက်- မြန်မာအစိုးရနဲ့ရော ရခိုင်ပြည်သူများနှင့်ပါ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ လိုပါသည်။
(ဍ) ရခိုင်ကို အပိုင်သိမ်းဖို့ ကြံစည်သော အစွန်းရောက်စစ်သွေးကြွတို့၏ ဂျီဟတ်စစ်ပွဲကို ထောက်ခံအားပေးသော မည်သည့်မူဆလင်ကို မဆို ရန်သူအဖြစ် သတ်မှတ်ပါသည်၊ ကိုယ့်အလုပ်ကိုယ်လုပ်၊ ကိုယ်စီးပွားကိုယ်ရှာ၊ ကိုယ့်တရားနှင့်ကိုယ်၊ ကိုယ့်မိသားစုနှင့်ကိုယ် အေးအေးဆေးဆေး ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ချမ်းသာနေလိုသော မည်သည့်မူဆလင်ကို မဆို မိတ်ဆွေအပြစ်သက်မှတ်ပြီး လက်တွဲဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
ထို့ကြောင့် ဂျီဟတ်စစ်ပွဲ ဆင်နွှဲသော တိရစ္ဆာန်များလို၊ မင်းမဲ့တိုင်းပြည်လို အုပ်စုဖွဲ့အနိုင်ကျင့်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သော ဘင်္ဂါလီအကြမ်းဖက်သမား လူရမ်းကားများနှင့် အဆက်အသွယ်ရှိခဲ့သူများ၊ အဆက်အသွယ်ရှိနေသူများ အဆက်အသွယ် ဖြတ်တောက်ဖို့ သတိပေးအပ်ပါသည်။
(ဎ) မြန်မာအစိုးရအနေဖြင့် ၁၉၄၂-ပုံစံမျိုးဖြင့် နယ်ချဲ့ကျူးကျော်ကာ ရခိုင်ပြည်သိမ်းတိုက်ပွဲ (သို့မဟုတ်) ဂျီဟတ်စစ်ပွဲကို တစ်ဖက်သတ် ဦးဆောင်ဆင်နွှဲလာသော ရိုဟင်ဂျာဆိုသူ နာမည်သူခိုး ဖိုးတွန်တီးများဖြစ်ကြသော နယ်မြေဓားပြ အကြီးစားတို့အား ထိရောက်စွာ အရေးယူဖို့လိုသလို၊ ရခိုင်တံခါးလုံခြုံရေးနှင့် လူအုပ်ဖြင့် အနိုင်ကျင့်မှုပပျောက်ရေး၊ ရခိုင်ပြည်သူတို့၏ အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ် လုံခြုံရေးကို အဓိကထားဆောင်ရွက်ရမည့် အပြင် အချုပ်အခြာအာဏာကို ကျူးကျော်စော်ကားလာသူ မှန်သမျှကို မည်သည့်ဖိအားပေးမှုကိုမျှ ဂရုမစိုက်ဘဲ ခုခံကာကွယ်ဖို့လိုကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။
(ဏ) “ရခိုင်များအား ဘင်္ဂါလီမူဆလင်များ၏ ခြိမ်းခြောက်မှုများ”
၁။ ရခိုင်များ နောက်ထပ် နှစ်လသာထမင်းစားနှင့်ကြ၊ ဗမာများပြန်လျှင် နင်တို့အသားကို ငါတို့စားမည်။
၂။ ဒီနေရာကို ငါတို့ပိုင်သွားပြီဆိုတာ မသိဘူးလား။
၃။ ငါတို့ကို ကမ္ဘာကကူညီနေတာ မသိဘူးလား။
၄။ ကမ္ဘာမှာ ငါတို့အမျိုးတွေ(လူမျိုးတွေ)အများကြီးရှိတယ်။ နင်တို့မှ မရှိဘူး။
၅။ နင်တို့မှာ သွားစရာသေလမ်းသာ ရှိတယ်။ ထမင်းဝဝစားထားကြ။
၆။ ဗမာအစိုးရကို ငါတို့ဝယ်ထားပြီ။
၇။ ဆော်ဒီမှာ ဗမာသံရုံးကို ငါတို့ကလစဉ်ပေးထားတာ၊ နင်တို့ပေးနိုင်သလား။
၈။ ငါတို့နောက်မှာ ကမ္ဘာကကူညီနေတယ်။
၉။ UN-ဟာ ငါတို့မိတ်ဆွေ၊ အမေရိကမှာ ငါတို့သမ္မတ အုပ်ချုပ်နေတယ်။
၁၀။ နင်တို့ ပါးစပ်ပိတ်ထားကြ။
၁၁။ နင်တို့မိန်းမများ ငါတို့ကို အားကိုးစေရမည်။
၁၃။ ဗမာပြည်လည်း ငါတို့လူအုပ်ချုပ်မယ်။
၁၄။ နင်တို့မြေနဲ့ နင်တို့ပစ္စည်းထားခဲ့။ အခုထွက်သွားကြ။
၁၆။ နောက်ထက် ဒီမြေမှာ မင်းတို့လုံးဝ မနေစေရ။
၁၇။ အလ္လာဝဂ်ကဘာ၊ အလ္လာဝဂ်ကဘာ၊(အလ္လာသခင်သာ အကြီးမြတ်ဆုံး)
အလ္လာ-ဘီစတိုဘာ၊ အလ္လာ-ဘီစတိုဘာ(အလ္လာသခင် ကောင်းချီးပေးပါ)
၁၈။ နိုင်ငံခြားမှာ စစ်သင်တန်းတက်ထားတဲ့ ငါတို့လူတွေရောက်နေတာ မသိဘူးလား။
၁၉။ နိုင်ငံခြားက ငါတို့အမျိုး (၅၀၀) စစ်သင်တန်း ဆင်းလာတာမသိဘူးလား။
၂၀။ ဒီနေရာကို ပြန်လာရဲလျှင် လာကြည့်။
၂၁။ ငါတို့မှာ ချမ်းသာတဲ့မူဆလင်နိုင်ငံတွေ အများကြီးရှိတာ မသိဘူးလား။
၂၂။ နင်တို့ဘာအားကိုးရှိလို့ ငါတို့ကို နှင်ထုတ်မှာလဲ။
၂၃။ ဗမာအစိုးရလည်း ငါတို့ဘက်က။
၂၄။ ဆော်ဒီဗမာသံရုံးဟာ ငါတို့ငွေကိုယူထားတာ။
၂၅။ အားလုံးမှာ ငါတို့ငွေတွေ။
၂၆။ မင်းတို့မှာ ဘာရှိလို့လဲ။
၂၇။ ဗမာပြည်ကို ငါတို့အုပ်ချုပ်မှာ နင်တို့ကို အရှင်မထားဘူး။
(နိုင်ငံတကာသတင်းများတွင် အီရန်ကဲ့သို့သော နိုင်ငံများ၊ ဘာသာရေးအစွန်းရောက်အဖွဲ့များနှင့် နိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့များကိုယ်တိုင်က မြန်မာပြည်တွင် မူဆလင်ဘာသာဝင်များကို အစုလိုက်အပြုံလိုက် သတ်ဖြတ် မျိုးတုံးနေပြီဟု သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း၊ ကန့်ကွက်မှုများ ပြုလုပ်နေခြင်းတို့ကြောင့် ပြည်တွင်းမှ အများသူငှာ ပြည်သူတို့ လေးစား ယုံကြည်မှု ရှိသူ လူ၊ ပုဂ္ဂိုလ်တို့၏ မိမိဂုဏ်သိက္ခာ အမည်နာမကို တာဝန်ယူ ဖော်ထုတ်ပြီး သဘောထားပြောဆိုချက်တို့ကိုလည်း သိရှိနိုင်စေရန် အရှင်ဝီရသူ၏ သဘောထားကို မူရင်းအတိုင်း မိုးမခမီဒီယာက ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။
မိမိတို့၏ သဘောထားမှာလည်း ဒေသဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်မှု အဓိကရုဏ်း၊ ပဋိပက္ခကြီးအဖြစ် ရှုမြင်ပါသည်။ ရခိုင်ဒေသခံများ၊ နယ်စပ်ဒေသက ဘင်ဂါလီလူမျိုးစုများ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ ဟိဒ္ဒူဘာသာ၊ မူဆလင်ဘာသာ၊ ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်များ အားလုံး ထိခိုက်ခံစားနေရသော အရေးအခင်းတခု အဖြစ် မြင်ပါသည်။ ရိုဟင်ဂျာဆိုသည့် အငြင်းပွားဖွယ်ရာ စကားရပ် အသုံးအနှုန်းကို မိုးမခမီဒီယာက လက်ခံခြင်းမရှိပါ။
နောက်ဆုံးတိုက်ပွဲကြီး ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရာရှိသော ပွဲ ဖြစ်သဖြင့် –
(၁) ဒီပွဲ ကြမ်းပါလိမ့်မည်၊
(၂) ဘက်စုံတိုက်ပွဲအသွင် တွေ့မြင်ရပါလ်ိမ့်မည်၊
(၃) ဒီပွဲသည် နွှဲခဲ့ဘူးသော အပွဲပွဲတို့ထက် ပိုမို ခက်ခဲနိုင်ပါလိမ့်မည်။
(၄) ထင်မှတ်မထားသော တိုက်ကွက်များကို မြင်တွေ့နိုင်ပါလိမ့်မည်။
(၅) ရေရှည်တိုက်ပွဲအသွင်လည်း သက်ဆိုးရှည်နိုင်ပါလိမ့်မည်။
ဤသည်ကို ကျွန်တော်တို့ မျှော်လင့်ထားရပါလိမ့်မည်။
အသင့်ပြင်ဆင်နိုင်ရန် ဘက်စုံ မျှော်တွေးထားရန် လိုပါလိမ့်မည်။
July 24, 2012 at 4:34 am | Reply
၊ကျောက်ဆည် အခြားအခြား မြောက်များလှစွာသောနေရာတွေ လတ်တလော ကျောက်ပန်းတောင်း၊
ဆိုင်းတောင် ကိစ္စတွေမှာ ကျွန်တော်တို့ဘာမှပြောခွင့်မရခဲ့ပါဘူး-အခုနိုင်ငံခြားမှာဖြစ်နေတာ ကျွန်တော်တို့နဲ့ မဆိုင်ပါဘူး။သူတို့သတင်းမှားတွေရထားတာဆိုရင်လဲ ကျွန်တော်တို့ပေးတာမဟုတ်ဘူး။တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေက သတင်းမှန်ရအောင် လုပ်ပေးလိုက်ပေါ့။ တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေစကားပြောပါစေ။နိုင်ငံတော်ရဲ့
ဘယ်နေရာဘယ်ကဏ္ဍမှာမှ ဘာတာဝန်မှမရှိတဲ့သူတွေ-အစ္စလာမ်ကို ဆဲဖို့တခုထဲသိတဲ့သူတွေ နောက်တမျိုးစတန့်ထွင်လာတာ ဘာမှ ဂရုစိုက်စရာမရှိပါဘူး။
July 24, 2012 at 4:51 am | Reply
We all should just ignore Hmu Zaw and others who share or comment or write similar posts for the Myanmar Muslims to engage with foreign countries and foreign media to protect the Myanmar Government’s policy on Myanmar Muslims and Rohingyas.
It is not our responsibility to cover up their misdeeds.
But if they agree to madealaw or order to CRIMINALIZE the widespread Hate Speeches and all the derogatory Name calling on ALL the Muslims of Myanmar (including legally staying Rohingya, Bengali and Indian mix-blooded Muslims).
Of course we need the Equal Rights.
Then, we could PROMISE to actively defend and even fight for them.
Now Hmu Zaw, Wairathu, Rakhines and Radical Bamas are repeatedly attacking not only the so called illegal migrants but citizen Rohingyas, ALL the Myanmar Muslims and Islam. They are using all the verbal and physical violent means to attack Islam i.e. waging almost all out war on Islam.